Yintoni enokuyenza ngamantombazane omtsha, ukuba kukho ezininzi?
Sonke sisuka ebuntwaneni sikhumbule imbongo malunga nendlela ikati izolo-namhlanje enamakhiti akhula ngayo, kodwa abafuni ukudla. Ewe, iingxaki ezichazwe kwivesi lezingane kunye neentsana ezisandul 'ukuzalwa kwaye azizange zimi kufuphi nezo zinokuvela. Abantu abaninzi bajamelene nombuzo: Yintoni enokuyenza ngamakhiti? Emva koko, xa kuninzi lwazo, nokwenza okuthile kwiintsana, izahluko ezahlukeneyo ziqala ukufika engqondweni, ngamanye amaxesha zikhohlakele. Kodwa, ukuba ucinga malunga nento enokuyenza ngayo iintsana ezisandul 'ukuzalwa, ukuba zininzi zazo, ke wanquma ukukhetha nayiphi na indlela yokuziphatha.
Ngoko, yintoni enokuyenza ngamakhwenkwe azalwayo, ukuba kukho ezininzi? Xa ucinga ukuba ufunda le nqaku, awuyi kubafudumala. Enyanisweni, ukuhlambalaza okunjalo kuqhutyelwa ngabantu abaninzi, kodwa oku akunakulungelelananga nangayiphi indlela. Akukho ndawo ekunikeni ubomi kubomi obuphilayo, kuba yintana, intsana okanye umntu, ukuba unalo ithuba lokuliphakamisa, okanye ubuncinane ligcine liphila. Ngaphezu koko, ngoku kukho iindlela ezininzi ongasindisa ngayo ikati ukusuka ekuzalweni kwamakhiti.
Kodwa, kunjalo, makhe sithethe malunga nento enokuyenza ngezilwanyana ezisandul 'ukuzalwa? Xa ikati inamakhiti amaninzi, kunzima ukuba ahlangabezane nayo. Kungenxa yoko kufuneka ujongane nabantwana abatsha. Oku kufuneka kwenziwe ukwenzela ukuba izilwanyana zingafi, ngokuqhelekileyo zenzeka xa iikati zingancedi. Kodwa, yintoni enokuyenza ngamakhiti kunye nendlela yokunyamekela ngayo? Kule nqaku, unokufunda imithetho yokutya nokunyamekela ama-kittens azalwa nje.
Ngoko, ukuze wenze konke okulungileyo, kufuneka uphathwe ngalokhu konke ukungathí sina. Intsana iphantse ibe ngumntwana, ngoko kufuneka ukhangele njengoko uyenzela umntwana. AmaKitten azalwa eyimpumputhe kunye nesisithulu, kodwa ngosuku lwesine baqala ukuvuselela ubisi lobisi kwiingqungquthela zomama wekati. Ngendlela, ngeli xesha, nokuba kunjani na, ungayikhupheli inkati kwikati, kuba iyakwazi ukuxhatshazwa yi-grey gland.
Kodwa, ukuba kukho ezininzi iikiti, ezinye zazo kufuneka uzikhathalele. Yintoni okufuneka uyenze? Okokuqala, kunene, kukulungele ukondla intsana entsha. Ngokuphathelele nasiphi na isilwanyana, isidlo esilungileyo sesilwanyana kwinyanga yokuqala ubisi lonina. Kodwa, ukuba akwanele, kubalulekile ukufumana indawo efanelekileyo yabantwana. Ngoko, okokuqala, kunika ubisi lwezintana, kodwa ungayidluli. Kwiintsuku zokuqala zobomi, uya kulahlwa ezimbini iishuuni zebisi eziphambili. Ukongeza kwimveliso emitsha, ungasebenzisa ubisi kunye nobisi lwe powder, ochithwa nobusi okanye ushukela. Ngendlela, ekuqaleni, kungcono ukuba ungaboni ubisi obunamafutha. Nsuku zonke kufuneka ukwandise isabelo somntwana ngesipuni esisodwa. Emva koko ama-kittens angaqaliswa ukuba atywe ngeekashas, ​​ezilungiselelwe kunye nalabo abondla abantwana.
Yondla i-kitten nganye iiyure ezimbini ukuya kweyure. Ngoko kuyimfuneko ukwenza malunga neentsuku ezilishumi ukusuka ekuzalweni. Unokondla i-kitten ngebhotile ekhethekileyo kunye ne-papilla. Qaphela ukuba ubisi aluhlali kwifriji ngaphezu kosuku. Kwakhona, ungakulibala ukuhlambulula, uhlambe kwaye ubilise ibhotile nge-pacifier. Ufanele uphathwe intaka njengendoda encinci kwaye ukhumbule ukuba ukunganakwa kwakho kunokukhokelela ekubeni uyagula, okanye uyafa. Ungalokothi unyanzele ikiti ukuba idle ngamandla, kuba ubisi lungena kwindawo yokuphefumula kwaye bangela imbangela yempumoniya. Xa intaka ijika inyanga, iyakwazi ukutya inyama. Kodwa, ke, zama ukuzondla ngeentlobo ezaneleyo, ngokomzekelo, inkukhu. Kwakhona, emva kwenyanga yobomi, ikati isenokuqala ukuthambisa iitatayi ezifihliweyo, ushizi wekottage, i-rice porridge, intlanzi.
Ekuzalweni, ama-kittens anesisindo esilikhulu elinamanci mabini. Emva koko bafumana igram nganye ngeveki. Ukutywina okunyuka kwindleko ngokukhawuleza kunokugqithisa, kodwa oku kubonakala kuphela kwiveki yesithathu yobomi bezilwanyana. Ukuba ikati ayifumananga ubunzima, kuyona nto ingcono ukuyifumana kwi-vet.
Enyanisweni, ukunyamekela intaka akukona nje ngokutya. Kungakhathaliseki ukuba uyondla umama wakhe okanye ikati, okanye wena, kufuneka umncede ahlambe iikiti. Ngokwemvelo, ikati izama ukuhlala idibanise, kodwa ayiyi kunqanda lwakho uncedo. Ubhokhwe obomvu kufuneka buhlanjululwe ngamaxesha onke ngendwangu ebomvu. Ngoko uya kusindisa abantwana kwiinkathazo ezifana neentambo.
Ukuze iikiti zikhule kwaye ziphuhlise kakuhle, kufuneka zidale izibizo ezibizwa ngokuba yizilwanyana. Ingaba ngathi i-incubators zangempela, kunye nezinye izitya ezinokushisa okulawulwayo. Ungaze utshise iibhokisi kunye nezibane kwaye ungazibeka kwibhetri. Ukuze ukwazi ukufudumala ikati, kukulungele ukusebenzisa iibhotile zeplastiki ngamanzi ashushu okanye zifudumala zihlanganiswe ngamathambo. Khumbula ukuba ngeveki yokuqala yobomi, iikiti kufuneka zifudumele kakhulu, ngoko ukushisa komoya okufuphi kuzo akufanele kube ngaphantsi kwama-degrees amathathu. Ngeveki yesibini, iyakwazi ukuhla ukuya kuma-twenty-eight, kwaye kwisithathu-ukuya kumashumi mabini anesine.
Umncedisi ngamnye ufuna izilwanyana zakhe zihlambuluke. Ngoko ke, wena, ulinda iikiti zakho, ngokwemvelo ufuna ukubafundisa ukuba baye kwindlu yangasese yekati. Oku kunzima ukwenza konke. Kodwa, okokuqala, kufuneka ubeke indlu yangasese kufuphi nendawo apho "isidleke" sisekhona. Emva koko ikati ngokwayo iya kubasusa abantwana bayo kwindlu yangasese kwaye ifundise apho iya khona. Kodwa, ukuba ikati yakho ayikwazi ukwenza zonke iikiti, kuya kufuneka ufundise indlu yangasese uqobo. Xa isilwanyana simncinci, emva kokusondla ngasinye sidinga ukucinywa ngendwangu, ukucoca umzimba kunye neendawo ezikufuphi. Ngaloo ndlela, uya kubangela ukuqala kokuvuthwa, kwaye kungekudala kwenzeke, bhetele kwintonga.
Ukuba wenza konke okulungileyo, uya kuba neenkomo ezinempilo kunye ezintle, onokuzinika abahlobo okanye abanye abantu abafuna ukuhlambalaza ekhaya, kodwa nokuba uhamba ngokwawo, kodwa uyazi ukuba ungathanda njani ngokuthembeka!
Yintoni yokutya ikati: ukutya kwekati
Unjani uhlobo lwenja umntwana analo?
Luhlobo luni lwesilwanyana esinokukwazi ukuba nalo ekhaya?
Iikati: ukunakekelwa kweengxowa zaseBrithani
Ukunyangwa kwezifo kwiintombi
Abancinci abantwana kunye nezilwanyana
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo ye-aquamarine
Iimbangela eziphambili zobunzima obunzima
Indlela yokwenza ngayo amehlo aluhlaza?
Ukuthandana ngamaziko omtshato
Ukupaka ngeqanda kunye nesipinashi "iMimosa"
I-Dishwasher Beko DIS 4530
Umntwana wenqaba ukutya emini
Ngexa umyeni esebenza
Unyana kaMichael Teryokhin unqobile i-Instagram kunye netalente yakhe, ividiyo
Ubuhlungu entanyeni nasemagxeni: izibangela, iimpawu, iindlela zonyango
Isithende esiqhekekileyo, indlela yokujongana nayo?
Izityalo zonyango i-lakonos: izibonelelo, zokupheka, isicelo